Global Voices teny Malagasy » Saudi Arabia: Làlana nakatona tsy ho azo izoran’ireo vehivavy mpihazakazaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Mey 2010 13:05 GMT 1	 · Mpanoratra miora
Sokajy: Arabia Saodita, Fahasalamàna, Fanabeazana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Vehivavy sy Miralenta
Lalana iray any amin'ny faritr'i Asir, Arabia Saodita, toerana izay tian'ny vehivavy maro tokoa anaovana fitaizam-batana no nakatona tsy ela akory izay tsy ho azon'ny vehivavy mpanao hazakazaka madinika idirana, lalana izay nolazain'ny Haia (Kaomisiona ho fanandratana ny haja amam-boninahitra sy ho fisorohana ny toetra ratsy) [Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice] ho mamoa-doza.
Nilaza ny Haia fa ny antony nandraràna izany dia noho ny tsy fahampian’ny hazavàna sy ny maha faritra mena iny faritra iny : Tsara kokoa ny hanakatonana izany mba ho fiarovana ny vehivavy. Na eo aza izany, maro ireo mpitoraka blaogy nitsipaka io fanapahan-kevitra io, ary nilaza fa misy antony hafa ao ambadik'io fanakatonana io.
Nanoratra fanamarihana momba io resaka io i Ahmed Faraz Rao, tao amin'ny Arab News  :
Raha zava-doza ho an’ny vehivavy io toerana io azafady ataovy izay hahtonga azy ho toerana azo antoka ho an'ny vehivavy toy izay hanao azy ho tany fady ho an'ny vehivavy tsy hanao hazakazaka eo.
Raha toa zava-doza ho an’ny olona ny toerana sasany, ny olona ve no tokony handao io toerana io sa ny mpitandro ny filaminana no tokony hiasa eo mba haha toerana azo antoka azy ?
Saudi Jeans, izay mitatitra fa raha araka ny hevitr'ireo mpihazakazaka eo dia mazava sy milamina ilay toerana, mampitaha ity fanapahan-kevitra ity amina singa iray ho “fisorohana ny herisetra” amin'ny hoavy :
Afaka miteny ianao fa ity fanapahan-kevitra noraisin’ny Haia ity dia fandraisana anjara ho fisorohana ihany, sady fanamelohana imasom-bahoaka tsotra izao ireo iharany. Raha tokony hijery ireny toerana lazaina ho tsy azo antoka ireny sy hiaro ny vehivavy amin'ny alalan'ny fisamborana ireo olona izay mety hanolana azy ireo, naleon-dry zareo nosakanana ireo vehivavy tsy hanatanja-tena eo… Ankehitriny tsy vaovao na mahagaga intsony angamba io karazan-toetra asehon’ny Haia io…
Etsy andaniny, American Bedu dia manamarika  fa tsy vao voalohany io fanapahan-kevitra io:
Efa nisy fanelanelanana nataona minisitra avy amin'ny governemanta manohintohina ny vehivavy sy ny fanatanjahan-tena . Tamin’ny taon-dasa dia maro ny efitrano fanaovana fanatanjahantena ho an’ny vehivavy no nolazaina fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna raha toa ka tsy nahazoana alalana avy amin’ny minisitra avy amin'ny governemanta. Mba tsy hiheverana azy ho toy ny varotra, satria misy ireo toerana anaovan'ny vehivavy fantanjahantena fotsiny ankoatry ny varotra na fikarakarana ny volon'izy ireo, tsy maintsy ilaina ny fahazoan-dàlana avy amin’ny governemanta.
Ary notohizany izany amin’ny filazana ny fahasahiranan’ireo vehivavy any Arabie Saodita te hitaiza vatana :
Maro amin’ireo sekoly Saodiana, dingana voalohany sy faharoa no tsy manana taranja ara-panatanjahantena ho an'ny ankizy. Tsy entanina hanao fanatanjahan-tena ireo vehivavy. Raha mba manana fahavitrihana sy te hampiasa izany ao an-trano, tsy ny vehivavy tsirairay no ho afaka handamina ny fandaharam-potoany hivoaka ny trano mba handeha an-tongotra na handray fiara fitaterana hamonjy foibe tsy miankina fanaovana fanatanjahan-tena. Etsy andaniny kosa anefa, afaka mandeha miaraka amin’ny kilaoty fohiny ireo lehilahy ary manao hazakazaka amin’izay tiany. Marobe ireo trano fanaovana fanatanjahantena ho an’ny lehilahy. Samy mahita ny ny foibe fanaovana fanatanjahantena ho an'ny lehilahy avokoa ary mahatazana avy eo amin'ny fitaratra be izay matetika ety anoloan'ireny toerana ireny an'ireo lehilahy manao fanatanjahantena ao.
Navoitran'i American Bedukoa koa fa ny fitaizam-batana dia tsy haitraitra, fa fitandroana ny fahasalamana. Io fijery io dia nohamafisin’ireo fanamarihana amin'ity andalan-tsoratra  izay nanamarihan’i Abu Sinan toy izao :
Iray amin’ireo antony mahatonga ny olana goavana momba ny diabeta amin'ny vehivavy Saodiana io. Tsy manao fanatanjahan-tena, sakafo tsy voalanjalanja, ireo rehetra ireo no mitambatra.
Etsy andaniny, Qusay ao amin'ny blaogin’i Saudi Jean, dia manana fomba fijery mandranitra momba ilay olana :
Te-hiloka aho fa misy olona te hivarotra fitaovana momba ny fanaovana fanatanjahantena an-tokantrano any izao dia manandrana ny manakana ny hetsika rehetra ivelan'ny tokantrano mba hahafahany mandafo betsaka kokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/05/18/6229/
 mampitaha ity fanapahan-kevitra ity amina singa iray ho “fisorohana ny herisetra” amin'ny hoavy: http://saudijeans.org/2010/05/01/commission-bans-women-sports/